Ogaden News Agency (ONA) – Wafti Heer Fadaraal Ah oo Jigjiga Gaadhay, Sababta.
Wafti Heer Fadaraal Ah oo Jigjiga Gaadhay, Sababta.
Posted by Dulmane	/ September 7, 2018
Wafti kasocda wasaarada waxbarashada ee Itoobiya ayaa maalinnimadii shalay gaadhay magaalada Jigjiga, halkaas oo sida lasheegayo ay baadhidoonaan musuq baahsan oo ragaadiyay goobaha waxbarashada ee Jigjiga.
Waftigan oo sida lasheegay xaqiiqo raadin ah ayaa baadhitaan kusamayn doona Jaamacada magaalada Jigjiga oo kamid ah goobaha ugu daran ee musuq maasuqu uu hadheeyay, waxaana lasheegayaa in ay durba waftigu bilaabeen baadhitaan ku aadan arinkaas.
Maamulka cusub ee xukuumada Itoobiya ay umagacowday Ogadenia ayaa lasheegayaa in uu amray in baadhitaan lagu sameeyo goobaha wax barashada ee magaalada Jigjiga, gaar ahaan Jaamacada Jigjiga Universaty oo ah meesha ugu daran.
Gudoomiyihii Jaamacada ayaa lagusoo waramayaa in lagu raad joogo kadib markii lawaayay meel uu cidhib iyo jaan dhigay, waxaana larumaysan yahay in uu ahaa qofka mas’uulka ka ah musuqa baahsan ee Jaamacada kadhex jiray.
Guud ahaa hay’adaha kala duwan ee Ogadenia kashaqeeya ayaa ahaa kuwo aan lala xisaabtamin isla markaan siwayn ugu takri fala hantida umada, waxaana lasheegayaa in ay saacad walba lumi jirtay lacag malaayiin ah oo hab aan sharci ahayn loomaamulay.
Xukuumada cusub ee Itoobiya ayaa dhankeeda balan qaaday in ay wax kaqabanayso isla xisaabtan la’aanta wadanka kajirta, hase yeeshee waxaa adkaan doonta sida wax looga qabto dadkii kuhalaaqay hantida shacabka iyo isla xisaabtan la’aanta.